Liverpool oo ku dhaw saxiixa Paulo Dybala.
Monday, May 20th, 2019 - 14:20:30
Saturday July 07, 2018 - 13:31:51 in Wararka by
Wargeysyada dalka Talayaaniga ayaa qoraya in kooxda Liverpool ay xiiseeneyso saxiixa weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Juventus Paulo Dybala.
Juventus ayaa haatan ku mashquulsan heshiiska ay ku dooneyso inay kula soo wareegto saxiixa Cristiano Ronaldo, taasoo u muuqata inay tahay riyo u rumooweysa kooxda lagu naaneyso marwada duqda.
Cristiano Ronaldo ayaa la filayaa in xiliyada soo aadan uu ugu dhaqaaqo kooxda reer Talyaani ee Juventus aduun dhan 100 million euro. Isla markaana uu sanadii mushaar ahaan u qaadan duuno aduun dhan 30 million euro.
Wargeyska "Calcio Mercato” ee dalka talyaaniga ayaa wuxuu sheegay in saraakiisha kooxda Liverpool ay qorsheenayaan in ay ka faa’ideystaan raacdada ay Juventus ugu jirto saxiixa Cristiano in ay kaga afduubtaan da’ayarkooda Paulo Dybala inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Si kastaba Liverpool ayaa wadahadal la bilaabi doonto Juventus si ay heshiis kaga gaaraan qiimaha ay kala saxiixan karto Paulo Dybala, gaar ahaan xili ay Reds u baahan tahay kubad sameeyo leh awooda sida Dybala oo kale.